unu Common ee CNC nidaamka xarunta machining Howlsocodsiinta - Shiinaha Changzhou Zhanhang International
unu Common nidaamka xarunta Howlsocodsiinta machining CNC
Sida aynu wada ognahay, nidaamka xarunta Howlsocodsiinta machining waa nidaam oo bixiya xoog ay qalab mishiinka. Aan xarunta machining nidaamka Howlsocodsiinta ah, workpiece lama samayn karo. Sidaa darteed, nidaam Howlsocodsiinta waa mid aad u muhiim ah in xarunta machining ah. Marka nidaamka Howlsocodsiinta guuldareysto, wax soo saarka machining oo dhan waa in ay joojiyaan. Maanta, Xiaobian bari doonaa qaladaadka caadi ah in nidaamka machining xarunta Howlsocodsiinta ah.
xarunta machining The hababka nidaamka Howlsocodsiinta failure waxaa ka mid ah tilmaamayaasha alarm iyo foori fiyuuska on unit xawaaraha ee ay gacanta ku tirsi iyo alaarmiga for daaro kala duwan boodi ilaalinta. Micnaha ay tilmaame alarm kala duwan la design cutubkan gacanta ku xawaaraha. Guud ahaan, waxaa jira noocyada soo socda:
1. hadda waa weyn, taasoo keenta qalab mashiinka si qaylo ah. A alarm hadda waaweyn dhacdaa. Waxaa jira laba fursadaha xaaladaha caadiga ah, in uu yahay, qaylo badan oo hadda ay sababtay khasaaraha iyo circuit gaaban qayb drive xoogga on unugga gacanta ku xawaaraha CNC ee xarunta machining ah.
2. danab Sare ayaa sidoo kale ka dhigi doonaa in alaarmiga qalab mashiinka. guud Waxaa jira saddex fursadaha for alaarmiga danab sare. Waxaa laga yaabaa in CNC danab aqbasho xarunta machining ka badan 10% qiimaha lagu qiimeeyo, ama waxqabadka ningax of motor Howlsocodsiinta ee la Dullaysane, ama danab sare sababa line cutubkan machining xarunta hawlgalka gacanta ku xawaaraha.
3, danab waa mid aad u yar yahay, taasoo keenta alaarmiga qalab mashiinka, ixtimaalka ee xarunta sida machining ah waa mid aad u dhif ah, waxaase laga yaabaa in danab talooyinka uu ka yar yahay 85 boqolkiiba qiimaha lagu qiimeeyo, ama la xiriira awood u ma wanaagsana.
4. Wadada-celinta ee xawaaraha la ogaado waa la jebiyey iyo qaylo ka waxaa keena. Xaaladan waxa ay alarm been ah, sababtoo ah garoonka ayaa dhibaato lahayn, oo ay jirto wax dhibaato ah in nidaamka warcelin ogaado. Inta badan qalabka digniinta ku dhacaan waa line-celin xawaaraha of motor ka Howlsocodsiinta CNC ee xarunta machining ah. Jaban ama dhalata xiriir saboolka ah ee line-celin la ogaado.
5. biiro Ilaalinta shidaa digniinta. biiro ilaalinta waa qalab loogu talagalay ilaalinta qalab mishiinka. Tusaale ahaan, danab badan oo ku gubi doonaa qaar ka mid ah qaybaha iyo tallaabooyin kale oo degdeg ah oo aan la xakameyn karaa by qalab mishiinka. Marka xaaladahan waa ay la kulmeen, biiro ilaalinta shaqeysiin doonaan si looga fogaado dhaawac Qeybta aan loo baahnayn, la mid ah stop ammaan ah.
6. alarm dollar, Jidka alarm dollar waa in CNC load farsamo ee xarunta machining waa caadi ahayn, ama xadka sare ee hadda motor on unit gacanta ku xawaaraha ayaa lagu wadaa aad u hooseeyo. magnet The joogto ah on motor ka magnet joogto ah ka dhigi doonaa alarm dollar ah. Haddii motor ee xarunta machining oo aan kala jejebiyey la cidleeyo, ay adkaan doonto in ay soo jeedin by gacanta ama isku shaandheyn qodaa, taas oo macnaheedu yahay in magnet joogtada ah waxaa gebi ahaanba go'ay.
7. fiyuuska The on unugga gacanta ku xawaaraha CNC ee xarunta machining la afuufi ama safarada breaker.
waqti Post: Aug-10-2018